‘सरकार र सिके राउतबीचको सहमति नेकपालाई अमान्य’::Nepalese News Portal
‘सरकार र सिके राउतबीचको सहमति नेकपालाई अमान्य’
काठमाडौं । स्वतन्त्र मधेसका नाममा पृथकतावादी अभियान चलाइरहेका सिके राउतसँग सरकारले गरेको सहमतिप्रति सत्तारुढ दल नेकपा भित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । सहमतिको औपचारिक घोषणा गर्नुअघि शुक्रबारको सचिवालय बैठकमै नेता माधव कुमार नेपाल, बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमतिपत्रको भाषामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
नेता नेपाल, गौतम र श्रेष्ठले घोषणा कार्यक्रममा नगएर सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाएको आसंका भैरहेका बेला सहमति भएको भोलिपल्ट नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीमबहादुर रावलले सरकार र सिके राउतबीच भएको सहमति राष्ट्र टुक्र्याउने कुरालाई वैद्यता प्रदान गर्नतर्फ उद्धत रहेको भन्दै यस्तो सहमति पार्टीलाई कुनै हालतमा मान्य नहुने बताएका छन् ।
पहिला गरेको देश टुक्र्याउने क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिको बारेमा राउतले आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया नराखेको बताउँदै उनले भने, ‘राउतजीले म अब नेपालको संविधानअनुसार शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिष्पर्धामा आएँ भनेर हिजो बोलेको भए म आज यहाँ स्वागत गर्थेँ। तर, उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा त्यस्तो बोल्नुभएन।’
रावलले सरकारले राउतसँग गरेको सम्झौताको उद्देश्य स्पष्ट नदेखिएको आरोप लगाए । ‘हिजो स्वतन्त्र मधेश संगठन र सरकारबीच सहमति भएको छ । यसले के अर्थ दिन्छ ? स्वतन्त्र मधेश भनेको के हो ? यसको प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई जवाफ दिनुपर्छु,’ उनले भने, ‘भोलि कसैले नेपाल समाप्त पार्टी गठन गर्यो भने सरकारले सहमति गर्ने त ? यो तर्क नै गलत हो ।’
रावलले राउत स्वयमले आफ्नो फेशबुक पेजमा जनमतसंग्रह गराउन नेपाल सरकार सहमत भयो भनेर पोष्ट गरेको पनि सुनाए। उनले भने,‘उहाँले फेशबुकमा यस्तो कुरा लेख्नुभएको छ, स्वतन्त्र मधेशका सबै मुधाहरु फिर्ता लिनपनि सरकार सहमत भयो भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ। यो निकै आपत्तिजनक हो। सरकारले यसको पनि जवाफ दिनुपर्छ ।’
उनले कसको स्वार्थमा यत्रो सहमति गरियो ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । उनले भने, ‘सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ । सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा स्व–शासनको कुरा उल्लेख गरिएको छ, जुन कुरा हामीले संविधान बनाउँदासमेत मानेका थिएनौं । अहिले फेरि यो कुराले प्रवेश किन पायो ?’
राउतले हिजोको सहमति कार्यक्रममा बडो कलात्मक रुपमा आफ्नो सम्बोधन गरेको उनले सुनाए । उनले थपे, ‘उहाँले कतै पनि राष्ट्र विखण्डनको कुरा फिर्ता लिनुभएको छैन। अहिले पनि उहाँले बोलेका विखण्डनका कुराहरु छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन् । बरु, उहाँले विगतमा मैले बोलेका कुराहरु ठीक थियो भनेर पुष्टि गर्न खोज्नुभयो।’
रावलले हिजोको सहमतिसँगै अब स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन भन्ने पार्टी देशैभरि खुल्ने पनि सुनाए । उनले भने, ‘सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने नाम नै पार्टीको काम हो, यो कुरा हाम्रा साथीहरुले बुझ्नुपर्छ । नाम मात्रै भन्ने हो भने हाम्रो पार्टीको नाम पनि भृकुटीमण्डप पार्टी राखे भैहाल्यो नि ।’
समग्रमा हिजोको सहमति त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उनले यसले सिँगो देश र जनतालाई आघात पुर्याउने बताए ।